Hagaha Socdaalka Fujairah Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Covid-19 ee Imaaraadka
Bariga ugu fog Imaaraadka Carabta, Fujairah waa Emirate-ka keliya ee aan lahayn xeeb ku teedsan Gacanka Beershiya. Sidoo kale waa kan ugu da'da yar ee Emirates, oo kaliya ka xoroobay Sharjah 1952.
In kasta oo Fujairah ay leedahay garoon diyaaradeed, waxay u xidhan tahay duulimaadyada ganacsiga. Soo-booqdayaasha diyaaradaha waxay imaan doonaan mid ka mid ah galbeedka Emirates.
Tareen ku raac Fujairah
Tareenadu waxay kaliya ka shaqeeyaan Dubai.
Fujairah waa qiyaastii 2 saacadood oo baabuur ah oo ka timaadda Dubai safarkaana wuxuu ku socdaa waddooyin xiran oo dhan.
Sidoo kale way fududahay inaad Fujairah ka timaaddo Cumaan u dhow, maadaama xuduudku aad u dhow yahay.
Fujairah waxay ku taal UAE, oo ka gaar ah Cumaan (laba waddan), in kasta oo ay ka tirsan yihiin kooxda loo yaqaan Waddamada GCC. Booqdayaashu waa inay lahaadaan fiisooyin u kala socda Cummaan iyo Imaaraadka si ay uga gudbaan midba midka kale baabuur ama qaab kale oo socdaal ah.
Basasku waxay si joogto ah ugu kala gooshaan Dubai iyo Fujairah (qiyaastii saacad kasta saacad iyo habeenba); Qiimuhu waa 25 dirham hal wado (tikidhada laga iibsado daaqada tigidhada intaadan fuulayn).
Adeegga baska ayaa raaxo leh. Haweenka iyo lammaanaha / qoysaska waxay fadhiyaan xagga hore laba illaa saddex saf iyo rag kuraasta harsan.
Basasku waxay ka baxaan Union Square ee Dubai, iyo Old Plaza Cinema / HSBC ee Fujairah (waxay istaagaan boosteejada basaska ee magaalada looga baxo, halkaas oo rakaabku u baahan yihiin inay ka degaan si ay tikidhada u iibsadaan ka hor inta aysan fuulayn)
Tagaasida waxay ka socdaan Fujairah (oo ku xigta shineemo hore) illaa Dubai iyo Sharjah. Taksi la wadaago oo la tago magaalada Dubai (Deira taksiga istaaga) ayaa ku kacaya US $ 7 waxayna tagayaan isla marka uu gaadhigu buuxo. Midka aan la wadaagin wuxuu ku kacayaa qiyaastii US $ 28 laakiin waxay kuxirantahay halka aad rabto inaad aado Dubai. Ku dar US $ 15 kale haddii aad rabto inaad aado aagga Marina oo ay ku yaalliin hudheelada dalxiisku oo dhan. Ka taxaddar - tagaasida mitirka ah ee ka timaadda Dubai illaa Fujairah waa laba jibbaar qiimaha.
Magaalada Fujairah waa ma loogu talagalay dadka lugeynaya, oo ay ku badan yihiin waddooyinka waaweyn. Nasiib wanaag, tagaasida, oo gebi ahaanba loo beddelay raxan cusub oo ah Nissan Altimas iyo Toyota Camrys, ayaa metered, oo ka bilaabmaa 2 dirham maalintii (2.50 habeenki) waa kuwo badan. Xaqiiqdii, dadka soo booqda ee isku dayaya inay ku wareegaan magaalada waxay soo jiidan doonaan boodhadh laga soo qaado darawallada tagaasida, kuwaas oo si dhab ah u rumaysan karin in qofna doorto inuu socdo.
Masaajidka Al Bidya - waa masaajidkii ugu da'da weynaa ee ka jiray Imaaraadka, asal ahaan waxaa la dhisay 1450 oo dhoobo iyo leben ah. Waxay ka timaaddaa magaalada Fujairah ilaa Dibba iyo ka dib markay ka gudubto magaalada Khorfakhan. Waxay ku taal cagaha buur yar oo leh munaarad qadiim ah. Goob xiiso leh oo loogu talagalay kuwa jecel inay la kulmaan adduunyadii hore. Waa goob ay ugu jecel yihiin dalxiisayaasha ajaanibta iyo kuwa gudaha ah. Waa u suurta gal dadka aan Muslimka ahayn inay galaan Masaajidkaan. Haweenka (sidoo kale ragga dharka gaagaaban) waa inay labbistaan ​​si ay u soo galaan. Shaqaaluhu waxay ku siinayaan dhar kugu habboon iyo xijaab. Labada munaaradood ee saacadaha qadiimiga ah sidoo kale waxay mudan yihiin in kor loo fuulo muuqaal ahaan.
Fujairah Fort - oo ku taal bartamaha magaalada, kormeerna ku leh magaalada Fujairah oo dhan iyo 3 km oo ka fog xeebta, oo la dhisay qiyaastii 1500 - 1550 AD oo markii hore loo dhisay inay difaacdo oo ay tirtirto kuwa ku soo duulay, oo ah shey aan si dhab ah loo ilaalin karin qarniyo ka hor, lana ilaaliyay adoon qurxin sidaa darteed waxaad runtii kaheli kartaa dareen ah siduu ahaa sanadihii hore oo dhan, sidoo kale inaad uga tagto munaarado iyo turre badan oo kuu furnaado si aad adigu uhesho. Shaqaalaha goobta waxay bilaash ku siinayaan buugaagta tilmaamaha.
Matxafka Fujairah - oo ku xigta Fujairah Fort. Waxay martigalisaa waxyaabo fara badan oo muujinaya bandhiga qadiimiga ah, oo ka dhacay agagaarka iyo hareeraha. Bandhiga joogtada ah waxaa ka mid ah lacagta birta ah, aaladaha beeraha, hubka iyo dheriyada. Gelitaanku waa 5 AED ($ 1.35).
Masaajidka Sheikh Zayed - Nooc yar oo ka mid ah Masaajidka weyn ee Zayed Sheikh Zayed, ka dib qaab dhismeed iyo dhisme la mid ah.
Maxaa laga qabanayaa Fujairah
Dalxiiska loo yaqaan 'Blue Diamond Alsalam Resort' oo dhowaan la furay wuxuu bixiyaa hawlo fara badan oo biyo ah wuxuuna ku yaal bartamaha Fujairah xeebta.
Fujairah Corniche - Xeebta Fujairah iyo kharashyada, waxay ku fiican tahay socodka iyo socod ku wareegida waxay martigelisaa makhaayado badan iyo nashaadaadyo sida kireynta baaskiil, fuulista faraska iyo garoomada kubbadda cagta ee yar yar ee kirada iyo howlaha ciidda.
Xeebta Umberalla - iyada oo lagu jiro horumarka ayaa martigelinaya tiro yar oo ah gawaarida cuntada iyo meel loogu talagalay tamashlaha
Fujairah sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa saldhig ay uga baxaan safarada meelaha ku hareeraysan, sida Khorfakkan iyo Kalba. Magaaladu waxay kusii kordheysaa muuqaal ahaan goob ganacsi, gaar ahaan meesha shidaalka laga hadlayo.
In kasta oo Badweynta Hindiya si maldahan u dhow, qaybo ka mid ah xeebta uma muuqdaan ikhtiyaar wanaagsan oo lagu dabbaasho xilliyada qaarkood. Si kastaba ha noqotee, Dibba (Isutagga Imaaraatka Carabta) oo 30 km u jirta magaalada Fujairah waxay noqon laheyd xulasho wanaagsan, halkaasoo aad ku raaxeysan karto xeebaha qorraxda leh oo aad ku tababbaran karto dhaqdhaqaaqa badda ee aad jeceshahay. Mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee la sameeyo ayaa ah inaad safar doon ugu safri karto mid ka mid ah jasiirado badan oo jiifa Gacanka Cumaan, oo ah meel ku wanaagsan socodka iyo kalluumeysiga.
Akadamiyadda Duulimaadka Fujairah waa iskuul duulimaad ku yaal garoonka diyaaradaha ee Fujairah.
Suuqa Jimcaha - dhexdeeda buuraha muuqaalka leh ee Fujairah bartamaha u dhexeeya Dubai iyo Fujaira, oo u dhow Masafi. Dalxiisayaashu waxay jecel yihiin iyo suuqyada usbuuca oo dhan inkasta oo magaca lagu iibiyo waxyaabo kala duwan oo ay ku jiraan oo aan ku xaddidnayn dheryaha dhoobada, alaabta guriga, rooga, soosaarka maxalliga ah iyo khudradda cusub, alaabta carruurtu ku ciyaarto halkan Ma jiro qiimo go'an, awoodda gorgortankaaga ayaa go'aamisa. Qiimayaashu aad ayey macquul u yihiin laakiin ha ilaawin inaad wax iibsato maadaama qandaraasyada maxalliga ahi ay isku dayayaan inay dhayalsiiyaan dalxiisayaasha Dadka deegaanku waxay ku raaxaystaan ​​hadhuudhka ku jira cobs iyo qumbaha cusub.
Xarunta Magaalada Fujairah] - suuqa laga dukaameysto ayaa la furay bishii Abriil 2012, waxayna leedahay 34,000 m2 (370,000 ft²) oo ah meel tafaariiq ah oo ay ku jiraan 105 magacyada suuqa dhexdiisa ah, 85% kuwaas oo ku cusub Fujairah waxaana ku jira shineemo VOX
Khaliijka Ubaxa Khaliijka ayaa iibiya falafel rooti rooti ah iyo qaniinyo iyo qaybo kale.
Makhaayadda al-Meshwar waxay ku taallaa Bartamaha magaalada dhisme aad u qurxoon waxayna ka kooban tahay “kafateer” dabaq-hoose ah oo u adeegta gogosha gobolka (shawarma, felafel iwm) iyo shiishadaha. Xagga sare waa maqaayadda ugu weyn, oo u adeegta qiimaha wanaagsan ee Lubnaan.
Saadaf - Beershiya Beershiya ayaa sidoo kale laga heli karaa magaalada. Qurxinta waa mid laga naxo (oo ay ku jiraan biyo-dhac ku taal bartamaha qolka cuntada), laakiin cuntadu waa heer wanaagsan.
Makhaayada Asmak Smakmak waxay bixisaa noocyo badan oo badeed oo laga soo qabtay badweynta maxalliga ah, horteeda Fujairah kalluunka u gaarka ah.
Halkee laga joogaa Fujairah
YHA backpackers hostel waxay leeyihiin qolal ku dhow 75 dirham. Milkiiluhu ma aha nin saaxiibtinimo badan mana ku hadlo Ingiriis aad u wanaagsan laakiin qolalka waa nadiif oo waa ay ku raaxaystaan ​​musqulaha gaarka loo leeyahay.
Hoteelka Al Diar Siji (qayb ka mid ah hudheellada Al Diar ee fadhigoodu yahay Abu Dhabi) guud ahaan waxaa loogu talagalay socdaalayaasha ganacsiga. Shaqaaluhu way feejigan yihiin qolalkuna way wacan yihiin. Waxaa sidoo kale jira naadiyo fara badan oo kuxiran hoteelka, oo ay kujiraan 10-pin bowling alley.
Guryaha Emirates Spring Hotel
Nour Arjan oo uu qoray Rotana
Dalxiis Blue Diamond Alsalam
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Fujairah
Digniinta dhaqameed ee ku saabsan darawallada Imaaraadka waxay ku khuseeyaan Fujairah sidoo kale. Shuruucda waddooyinka ayaa la fahamsan yahay inay jiraan, laakiin darawallada ayaa u janjeera inay qatar galaan taasoo u muuqaneysa inay is dilaan soohdinta soo booqdayaasha badan. Intaa waxaa sii dheer, maskaxda ku hay in waddooyinka badankood ay yihiin haad fara badan dhinac kasta oo magaalada ka mid ah, taas oo macnaheedu noqon karo in taksi ama mid gaar ah uu yahay kan ugu fiican halkan. Intaa waxaa sii dheer, halka mitirka safarku uusan joogin ama "uusan shaqeynin", ku heshii qiimaha ka hor safarka.
Safar aad ugu dhow Khor Fakkan (oo ka mid ah magaalada Sharjah) ayaa si weyn loogu taliyay, maadaama xeebta loo arko mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan gobolka.
Baabuur la dhex maro buuraha Xajar (oo ka gudba xadka ilaa Cumaan) ayaa sidoo kale noqon kara mid lagu raaxeysto, hase yeeshe tani waxay u baahan doontaa xoogaa qorsheyn ah oo ku saabsan heerka baabuurka la wado.
Baadhitaano Goobo Badan oo Xalaal Imaaraadku ka tago
ku yaal Fujairah
Dhismooyinka Hotelka Emirates Springs Fujiarah
Dalxiis Hilton Fujairah
Le Meridien Al Aqah Xeebta Dalxiis ee Fujairah
eHalal Safarka Mart > Imaaraatka Carabta Xalaal Safar > Hagaha Safarka Fujairah Xalaal